SENATERA LYLISON: Tsy voatery ho ministra vao afaka mampandroso firenena · déliremadagascar
SENATERA LYLISON: Tsy voatery ho ministra vao afaka mampandroso firenena
politique	 26 janvier 2019 lynda
Nambaran’ny senatera Lylison René de Rolland fa tsy voatery ho ministra vao afaka mampandroso fa na dia mpamafa làlana aza dia efa mampandroso firenena izany. Samy manana ny anjara tandrify amin’ny fampandrosoana ny tanindrazana ny tsirairay, araka ny fanehoan-keviny manoloana ny fanendrena ny mpikambana ao amin’ny governemanta vaovao izay tarihin’ny praiministra lehiben’ny governemanta Christian Ntsay.
Manantena ny senatera Lylison René de Rolland fa hanatanteraka ny velirano nataon’ny filohan’ny repoblika ireo mpikambana ao amin’ny governemanta ireo. Miandrandra fampandrosoana ao anatin’ny fotoana fohy rahateo ny vahoaka Malagasy.
One comment on “SENATERA LYLISON: Tsy voatery ho ministra vao afaka mampandroso firenena”
Pingback: SENATERA LYLISON: Tsy voatery ho ministra vao afaka mampandroso firenena - ewa.mg